A na-ahazi rollers na-atụgharị aka na ntinye aka na-ebugharị onwe ya. N'ihi na elu ọsọ ọsọ nke mgbanaka agbụrụ dị okirikiri, ọ nwere arụmọrụ onwe ya. O nwere ike ikwe ka osisi ahụ gbagọọ, akụkụ ekwe ekwe dịkwa 0,5 Celsius ruo 2 Celsius ma ikike axial buru oke ibu. O nwekwara ike iburu ibu radial mgbe ị na-ebu ibu axial. A na-ejikarị mmanụ mmanu eme ihe.